ONIVERSITEN’I MAHAJANGA : Hiakatra filan-kevi-pifehezana ireo mpianatra nanakorontana
Ny 04 hatramin’ny 10 desambra 2017 izao no voalaza fa hisy ny filan-kevi-pifehezana na Codis hampiantsoana ireo mpianatra nanakorontana teny amin’ny oniversiten’Ambondrona Mahajanga, herinandro vitsivitsy izay ka nitarika ny fampiatoana ny fianarana teny. 21 novembre 2017
Ny 08-09-10 novambra teo no saika nanaovana izany ary efa voazara tamin’ireo mpianatra ny taratasy fiantsoana saingy najanona taorian’ny fivorian’ireo mpampianatra sy ray aman-dreny ary mpianatra miaraka amin’ireo tompon’andraikitra. Tsy nanaiky ny hiakatra Codis ireo mpianatra nantsoina, saingy tsy nanaiky lembenana kosa ny mpampianatra.
Nisy ny fifandratrana samy mpianatra teny, nisy ny fanimbana ny fananan’ny oniversite, toy ny tranon’ny mpianatra ary nisy koa ny fandrobana ny entan’ireo mpianatra hafa tsy mitovy hevitra. Ny volana oktobra teo dia mpianatra miisa 51 no nahazo fiantsoana. Tamin’ity daty vaovao ity kosa dia nihena ny isan’ireo mpianatra voaantso hiatrika izany Codis izany.
Ny maro indrindra, miisa 30 dia avy amin’ny faritra Sofia. Ny 2 kosa avy eto Mahajanga. Miisa 2 ny avy any Vakinankaratra ary 6 avy any Toamasina. Miisa 6 ny avy any Diana sy ny 5 avy any Sava. Mbola milaza moa ireo mpianatra sasany fa tsy hanatrika io fampiakarana ‘Codis’ io satria tsy nandray anjara tamin’ny fanakorontanana sy ny fanimbana fotodrafitrasa nandritra ny fitokonana nataon’izy ireo.
Ny tompon’andraikitra kosa dia manafatra azy rehetra nahazo fiantsoana mba ho tonga fa io no fotoana ahafahany mitondra ny fiarovan-tenany. Amin’ity herinandro ity moa no tokony hiditra mianatra ireo mpianatra eny amin’ny oniversite saingy miandry kosa ny fandaharan’ny sampam-pampianarana tsirairay.